China BENZALKONIUM CHLORIDE fekitori uye vagadziri | CHEMU-PHARM
Benzalkonium Chloride yakakosha cationic quaternary ammonium munyu surfactant, iyo inoshandiswa zvakanyanya mukuchengetedza kwega, shambuu, inogadzirisa uye zvimwe zvigadzirwa. Iyo ine yakanaka anti-static, inochinjika uye inorwisa-ngura mhedzisiro, uye inogona zvakare kushandiswa mukuvhara mbichana, kudhinda uye kudhaya vebatsiri, machira kuwacha uye mamwe maindasitiri.
Munhu akaidza: 80% EINECS No. 205-351-5 Benzalkonium Chloride1227 rudzi rwecationic surfactant, ndeye nonoxidizing boicide. Benzalkonium Chloride 1227 inogona kunyatsobata algae kuparadzira uye sludge kubereka. Benzalkonium Chloride 1227 ine zvakare inopararira uye inopinda zvivakwa, inogona kupinda nekubvisa sludge uye algae, ine zvakanakira yakaderera chepfu, hapana chepfu kuunganidzwa, yakanyungudika mumvura, iri nyore mukushandisa, isina kukanganiswa nekuoma kwemvura. Benzalkonium Chloride 1227 inogona zvakare kushandiswa seanorwisa-chakuvhe mumiriri, antistatic mumiriri, emulsifying
mumiririri uye nekugadzirisa mumiririri mune dzakarukwa uye dhayi minda. zvinhu indekisi Chitarisiko chemvura mwenje mwenje mwenje mwenje waxy yakasimba Usage: Sezvo nonoxidizing boicide, muyero we50-100mg / L inosarudzwa; sezvo sludge inobvisa, 200-300mg / L inosarudzwa, yakakwana organosilyl antifoaming mumiriri inofanirwa kuwedzerwa nekuda kweichi chinangwa. DDBAC /BKCinogona kushandiswa pamwe chete nezvimwe fungicidal senge isothiazolinones, glutaraldegyde, dithionitrile methane ye synergism, asi haigone kushandiswa pamwechete neklorophenols. Kana tsvina ikaonekwa mushure mekukandwa kwechigadzirwa ichi mukutenderera kwemvura inotonhorera, tsvina inofanirwa kusefetwa kana kubhururudzwa munguva yekudzivirira dhipoziti yavo pasi pekutora tangi mushure mekutsakatika kwechando.
Pashure: SODIUM LAURYL ETHER SULFATE 70% (SLES)
Zvadaro: DICHLOROMETHANE / METHYLENE CHLORIDE